Iingcebiso zeFashoni yaMadoda atyebileyo | Amadoda aQinisekileyo
Yiba neklasi | | Ukunyamekela, yokuPhila, fashion, Imizila
Ekuphela kwento esizenza ngathi kukunika uthotho lweengcebiso kumadoda ane ukukhuluphala, nangona enye ukutya okunamafutha asezantsi Ingasinceda ukuba sibe sempilweni, kwaye ekuhambeni kwexesha sibe nomfanekiso ongcono, ayisiyombono yethu ukunyanzelisa ushishino lwefashoni kwezi ntlobo zabantu, ngokuchaseneyo.
Into yokuqala yokugcina engqondweni kukuba iimpahla azinakuxinana kakhulu. Nangona iimpahla ezikhululekileyo zisenza sityebe, kusabalulekile ukuba iimpahla ezixineneyo zingaziphawuli kakhulu iimilo zethu, siya kubenza babone uthando lwethu luphatha ngakumbi. Soloko ukhetha iimpahla ngokobungakanani bakho, kungabi ngaphezulu okanye ngaphantsi, yiyo kuphela eya kukulingana ngokuchanekileyo.
Kubalulekile ukuba ukhethe ijezi, iihempe zepokotho, iihempe kunye nezikipa, ezisinika imilo ethe kratya emagxeni hayi imilo erhangqi. Eli nqaku liza kwenza ukuba amehlo ajonge ngakumbi kwinxalenye ephezulu yomzimba wakho.
Kulumkele ukuprintwa okukrelekrele, imigca ethe tyaba kunye neebhotile zempahla ezinombala okhanyayo. Ukuba ukhetha imigca ethe nkqo, imibala emnyama kunye nokuprinta nkqo okanye iisilika zescreen, uya kuba nembonakalo enobunzima beekhilogram ezintlanu ngaphantsi.
Khetha ibhulukhwe ephantsi. Ukuba usebenzisa ubungakanani obuqhelekileyo, uhlobo oluthile lwebhaluni luya kubakho ekuphakameni kwenkaba yakho, isinqe esiphantsi kwembono siya kuya ngqo esinqeni sakho kwaye uya kuthintela ukungahambi kakuhle esitratweni.
Musa ukuphatha izinto ezininzi kakhulu ezipokothweni. Oko kuyakwenza ukuba umfanekiso wakho wandise, khetha ibhegi ebanzi ebanzi yokuthwala yonke into oyifunayo.
Sebenzisa i-V-intamo kwii-t-shirts zakho, intamo engqukuva ayizukuthopha. Iibhatyi kufuneka zihlale zingamaqhosha ama-3 ukwenza isitayile sakho kwaye xa umile zama ukuhlala uthe nkqo kangangoko, ukuba uthembele phambili okanye ubuye umva ujonge utyebile.
Zama ukufumana umphetho webhulukhwe ube sezantsi kangangoko. Ngokufutshane uyishiya, uya kutyetyiswa uya kubonakala. Silindele izimvo zakho kwezi ngcebiso kunye nezo zesivuno sakho.
Ukutyeba kakhulu akufuneki kube ngumqobo ekubonakaliseni ukuheha kunye nomtsalane, ngakumbi kumadoda akwazileyo ukoyisa ukwenzakala komzimba wabo okanye uhlobo olufanelekileyo lobuhle bendoda ende kwaye ebhityileyo. Ewe, nokuba ulifumene njengelifa okanye ulifumene ngenxa yokutya ngendlela engalunganga, siza kuzama ukufumana eyona nto ibalulekileyo kumzimba wakho, ngamanye amacebo efashoni aza kulunga ukuba abe nefashoni kwaye ngokucacileyo abonakale engcono:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Imizila » Iingcebiso zefashoni zamadoda atyebileyo
Ndiyayithanda ingcebiso, zezona zilungileyo, enkosi kuba bandincedile kakhulu ngokubhekisele ebomini bam.
Kulungile, kodwa inqaku lehems lindenza ingxolo, mhlawumbi ukuba zi-chubby xa uzisonga ziyanciphisa ubukhulu kwaye ukuba kwimeko yokutyeba kakhulu kunciphisa ukuphakama kwabantu, ukusika nangaphezulu banokujongeka njengoonodoli bemodeli.
Enye into unokufaka ezinye iingcebiso kwiimpawu ezahlukeneyo zamadoda (amafutshane, amade, atyebileyo, anolusu olukhanyayo, mnyama, njlnjl. Ndicinga ukuba ngokwefashoni yamadoda yenza ngokubanzi okanye abhekisele kwimfashini okanye kwizimbo zabayili izimbo ezaziwa ngabambalwa kakhulu!
Kwelinye icala ukudityaniswa kwemibala kunye neminye imifanekiso enceda amadoda ngokubanzi kumfanekiso ongcono.
Ngokubanzi ingcebiso ilungile, mhlawumbi banokulincedisa inqaku, kodwa lilungile!
uSaul rios sitsho
Ndizithandile iingcebiso !!! Enkosi!!!
Ndingu 1:75 ubunzima 90 kodwa ubuso bam butyebe kakhulu intamo yam imfutshane kakhulu
kwaye andazi ukuba ndinxiba njani
Andinamsebenzi wokucheba iinwele kuba ubuso bam butyebile kwaye ekungeneni ndiphantse ukuba neenwele
Ndiyathemba ukuba ungandinceda !!!!
Iwaka lobabalo !!!!!!!!
Phendula Saul rios
Isuti emhlophe, ngaba unesibindi?